ဒီဂီယာကို စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ရာမို့စ်နဲ့ မော်ရင်ဟို
ဒီဂီယာ De Gea ကို စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ရာမို့စ် Ramos နဲ့ မော်ရင်ဟို Mourinho
16 Jun 2018 . 7:12 PM
စပိန်အသင်းခေါင်းဆောင် နောက်ခံလူ ရာမို့စ် Ramos က ပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာ စိတ်ပျက်စရာအမှားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ဒီဂီယာ De Gea ကို အားပေးခဲ့ပြီး စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ ပေါ်တူဂီနဲ့(၃)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမှာ စပိန်အသင်းပေးလိုက်ရတဲ့ ဒုတိယဂိုးက ဒီဂီယာရဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့အမှားကနေ ခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး အဲဒီအတွက်လည်း ဒီဂီယာဟာ ဖိအား၊ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဲဒီပွဲအပြီးမှာ ဒီဂီယာက “ဂိုးသမားနေရာမှာ ကစားဖူးတဲ့သူမှ ကွင်းထဲမှာ ဘယ်လောက်အခက်အခဲ ဖိအားတွေရှလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်”လို့ မီဒီယာတွေကို ဖြေကြားခဲ့တယ်။
အခု ရာမို့စ်ကလည်း သူ့ရဲ့အသင်းဖော် ဒီဂီယာ စိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့အတွက် အားပေးစကားဆိုခဲ့ပါ။ ရာမို့စ်က သူရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ”အမှား မလုပ်ဖူးတဲ့သူဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးနဲ့။ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့အသင်းဖော်ပဲ။ ဒီဂီယာ၊ ရှေ့ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်”လို့ ရေးသားခဲ့တယ်။ ရာမို့စ်အပြင် မန်ယူအသင်းနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ကလည်း ”အဲဒီလို အမှားမျိုး မန်ယူအသင်းမှာ ဒီဂီယာ မကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အံ့အားသင့်စရာ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအကောင်းဆုံးဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအမှားတွေက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကစားသမားတိုင်း ဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂီယာ De Gea ကို စိတျဓာတျမကဖြို့ တိုကျတှနျးခဲ့တဲ့ ရာမို့ဈ Ramos နဲ့ မျောရငျဟို Mourinho
စပိနျအသငျးခေါငျးဆောငျ နောကျခံလူ ရာမို့ဈ Ramos က ပျေါတူဂီနဲ့ပှဲမှာ စိတျပကျြစရာအမှားကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ဒီဂီယာ De Gea ကို အားပေးခဲ့ပွီး စိတျဓာတျမကဖြို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုခဲ့တယျ။ ပျေါတူဂီနဲ့(၃)ဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲမှာ စပိနျအသငျးပေးလိုကျရတဲ့ ဒုတိယဂိုးက ဒီဂီယာရဲ့ ဘယျလိုမှ မဖွဈသငျ့တဲ့အမှားကနေ ခှငျ့ပွုလိုကျရတာဖွဈပွီး အဲဒီအတှကျလညျး ဒီဂီယာဟာ ဖိအား၊ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ အဲဒီပှဲအပွီးမှာ ဒီဂီယာက “ဂိုးသမားနရောမှာ ကစားဖူးတဲ့သူမှ ကှငျးထဲမှာ ဘယျလောကျအခကျအခဲ ဖိအားတှရှေလဲဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ”လို့ မီဒီယာတှကေို ဖွကွေားခဲ့တယျ။
အခု ရာမို့ဈကလညျး သူ့ရဲ့အသငျးဖျော ဒီဂီယာ စိတျဓာတျမကစြဖေို့အတှကျ အားပေးစကားဆိုခဲ့ပါ။ ရာမို့ဈက သူရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ”အမှား မလုပျဖူးတဲ့သူဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးနဲ့။ မငျးဟာ ငါ့ရဲ့အသငျးဖျောပဲ။ ဒီဂီယာ၊ ရှဆေ့ကျကွိုးစားသှားမယျ”လို့ ရေးသားခဲ့တယျ။ ရာမို့ဈအပွငျ မနျယူအသငျးနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ကလညျး ”အဲဒီလို အမှားမြိုး မနျယူအသငျးမှာ ဒီဂီယာ မကြူးလှနျခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အံ့အားသငျ့စရာ စှမျးဆောငျမှုကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီအကောငျးဆုံးဆုတှကေို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုအမှားတှကေ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ကစားသမားတိုငျး ဖွဈတတျကွတာပါပဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Ko Kyue . 22 mins ago